2n3904: inona no tokony ho fantatrao momba an'ity transistor | Fitaovana maimaim-poana
2n3904: inona no tokony ho fantatrao momba an'ity transistor ity
Anisan'ireo singa elektronika nodinihina ato amin'ity bilaogy ity dia efa misy karazana transistors marobe, na ny bipolar na ny effets an-tsaha. Fotoana izao hanampiana iray hafa ao amin'ilay lisitra, toy ny 2n3904, izay iray amin'ireo be mpampiasa indrindra amin'ny tetik'asa elektronika marobe. Amin'ity tranga ity dia BJT hafa, na bipolar, fa misy toetra mahaliana sasany izay tokony ho fantatrao.
Eto ianao dia hahalala hoe inona marina izany, ny pinout, aiza no ahitana datasheets fitaovana, ny fomba fividianana iray amin'izy ireo, ary lava sns.
1 Inona ny transistor 2n3904?
1.1 Endri-javatra sy datasheet
2 Aiza no hividianana 2N3904
Inona ny transistor 2n3904?
El Transistor 2N3904 Izy io dia karazana transistor bipolar, karazana BJT ho an'ny famantarana kely (hery ambany sy hery ambany, misy tanjaka antonony). Ity karazana transistor ity dia NPN, ary manana toetra mahaliana sasantsasany, toy ny famindrana haingana (afaka miasa miaraka amin'ny haavo avo), ny herin'ny volony ambany, ary mety amin'ny fifandraisana sy ny fanamafisana.
Afaka mahita ao anatiny ianao gadget be isan'andro toy ny fahitalavitra, radio, horonan-tsary na horonan-tsary, famantaranandro quartz, jiro fluorescent, telefaona sns.
Tena mahazatra io fitaovana transistor io. Izy izay dia patente an'i Motorola Semiconductor tamin'ny taona 60, miaraka amin'ny PNP 2N3906 (mpiara-dia aminy). Misaotra azy fa nitombo ny fahombiazany. Fanampin'izany, mora izy io, miaraka amina fonosana TO-92 anio, ho solon'ny fonosana vy taloha anao.
Ho fanampin'ny Motorola, orinasa maro hafa no nanamboatra azy toy ny Fairchild, ON Semiconductor, Semtech, Transys Electronics, KEC, Vishay, Rohm Semiconductor, Texas Instruments (TI), Central Semiconductor Corp, sns.
Raha ny amin'ny ny pinout anao, azonao jerena amin'ny sary teo aloha io, fa toy ny mahazatra amin'ny transistors, manana pin-nisa telo ianao mamela ny ampahany boribory amin'ny fonosana mankany ambadika, izany hoe handika ny sary ary hampifanaraka ny iray izay hazoninao eny an-tananao izao , tokony apetrakao eo alohanao ny ampahany fisaka.
Endri-javatra sy datasheet
Raha manontany tena ianao momba ny endri-javatra amin'ny antsipiriany amin'ity karazana transistor ity dia ireto ny sasany amin'izy ireo:
Fitaovana: transistor Semiconductor
Karazana: bipolar na BJT
Tetezamita matetika: 300Mhz
Fanaparitahana herinaratra: 625mW
Fantson'ny mpanangona ho an'ny ankehitriny mivantana: 200mA
Mahazo tombony mivantana (hFE): 100
Fiaraha-miasa eo anelanelan'ny mari-pana: -55ºC ka hatramin'ny 150ºC
Emitter collector - angovo azo avy amin'ny saturation latsaky ny 300 mV amin'ny Ic = 10mA
Fampahalalana bebe kokoa momba ny transistors - hwlibre.com
Aiza no hividianana 2N3904
Para mividy transistor Amin'ireo toetra ireo dia azonao atao ny mampiasa ny serivisy samihafa amin'ny magazay manokana amin'ny elektronika, na amin'ny sehatra toa an'i Amazon. Ohatra, ireto misy soso-kevitra vitsivitsy:
Kitapo bojack misy sombiny 250. Transistor misy karazany marobe, anisan'izany ny 2n3904.
Tsy misy vokatra. Izy io koa dia manana fonosana 50 singa an'ny 2n3904.
TooGoo Manolotra fonosana iray hafa somary mora kokoa ihany koa izy ary miaraka amin'ireo singa 25 an'ny 2n3904.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitaovana maimaim-poana » Fitaovana elektronika » 2n3904: inona no tokony ho fantatrao momba an'ity transistor ity
Isolation transformer: ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao